Gabar Reerkoodii Laga soo Masaafaystay, Qaalliga oon Muslim Ahayn iyo Markhaatiyaashii oo Mid Kaliya Marag Furi Karo! Qaybtii Labaad
Qoraal cinwaankaas wata ayaan soo qoray 2003-dii markii la fadhiyey Eldoret, Kenya. Ma filayo in fahanka cinwaankaas uu dhib ku ahaa qof Soomaaliga ku hadli kara. Nasiibdarro, waqtigaas dadka badankiisa ooy ku jiraan dad hadda mucaarad sheegta waxay ku hawllanaayeen ka qeybgalka shirka sida iyagoo sheeganayey bulshada rayidka ah amaba taageerayey qabqablayaashii dagaalka ee ay isku heybta ahaayeen. Malaayiin Soomaaliyeed oon goobjoog ahaynna waxay kala socdeen warbaahinta iyagoo aad u daneynayey shirkaas.
Markaan arkey in xaalka Soomaalidu marayo nin bukoow boqol kuu talisay dabadeedna dhibkii na gaaray dartii ay dadku iska jecel yihiin in wax laga sharqamiyo iyagoon sii eegin ciribta dambe ayaan goostay in aan cinwaankaas ku cabbiro waxaan dareemayey.
Inkastoo dadka qaarkiis ay neef geel ah soo qaataan markii laga hadlayo Soomaaliya; anigu waxaan ka dhigay Maandeeqdii gabadha ahayd ileyn hooyadu gabar bey mar ahayde. Markaan masaafada ka hadlayey qof kasta waa ogaa in dagaaloogayaashii Kenya joogay aan cidna dooran ee ay si khasab ah u matalayeen dadka Soomaaliyeed. Marka uma baahna sharrax dheeraad ah. Qaalliga oon muslim ahayn waa Bethuel Kiplagat � waa ninkii dowladda Kenya u xilsaartay inuu shir-guddoon ka ahaado shirkii Kenya.
Haddii qaalligu yahay qof muslim ah oo mas�uul ah wuxuu ninka haweeneyda wata weydiiyaa inuu fasax ka heysto caa�ilada haweentaas uu la soo baxay. Xitaa hadduu yahay qaalliyaasha suuqa madow waa inuu ugu yaraan ku dhahaa samee meher-xadka laakiin waa inaad gabadha gurigoodii si dhaqso ugu celisaa. Marka inta badan reerka gabadha la iskuguma daro in laga meherxado iyo in la waayo gabadha meel ka baxday oo meel kale lagu qariyo. Marka marna ka meynaan filayn in Kiplagat noo dhacsho xaqii ka maqnaa ummadda Soomaaliyeed isagoo dhahaya: dadkiinaan dagaaloogayaasha ah uma qalantaan inaad qaran dhistaane ka taga meesha oo keensada dad kale.
Maddaama shirka loo xilsaaray waddama safka hore wixii meesha si fiican uga muuqday waxay ahaayeen seddexda waddan ee Jibuuti, Kenya iyo Itoobiya. Maaddaama aan qof aan muslim ahayn aan markhaati la gashan karin markii laga hadlayo guur iyo waxyaalo badan oo la xiriira axkaamta Islaamka; waxaa markhaati gelikaray waa Jibuuti laakiin nasiib darro Jibuuti waxay ahayd waddanka dhaqaale, siyaasad iyo saameyn kalaba ugu yarayd. Marka markhaatiyaashiina waa na gabeen. Gabidda kaliya maahee iyagaaba la rabay dagaaloogayaasha in waddanku u afduudnaado.
Markaan maqaallada noocaas ah qori jiray waxaan la kulmi jiray dad badan oo igu mucaaraday. Qaar si handadaad ah bey iila hadli jireen ama waraaqo iigu soo dirijireen. Qaarna sidii iyagoo ii nasteexeynaya bey dhihi jireen arrimaha faraha kala bax, waxba kama qaban karin marka intaan dad dacaayadeyn lahaa waxaa ii fiican bey dhaheen inaan iska aamuso.
Waxaan bilaabay maqaalo taxane ah oo ka hadlayey qiimaha dhulka iyo sida aysan Soomaalidu u qaddarin. Markaan muddo sanad ka badan ku celcelinayey arrintaas anoo dadka tusaya in arrintu ku socoto in Maandeeq loo gacangelinayo dagaaloogayaasha iyo markhaatiyaashooda ayaan jeclaystay bal in aan si sawir ah ugu muujiyo dadka Soomaaliyeed ileyn waa iyada la dhaho sawirku wuxuu ka gudbin ogyahay boqollaal qoraal. Waxaan la xiriiray nin sawir-gacmeed ku dheereeya oo la yiraahdo Bashiir Abiikar oo markaas Kanada joogay. Waxaan u sheegay waxaan rabay wuuna ii sameeyey. Sawirkii uu sameeyey waxaan ku dhigay jaldiga buug aan ku uruuriyey maqaalladii ka hadlay qiimaha dhulka iyo kuwa kale. Markey soo dhawaatay dhoobdhoobkii xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynenimada ee Kenya lagu falkiyey ayaan buuggii daabacay. Sida aad sawirka ka arki doontaan waa Meles Zenawi oo wata booyad shidaal ah oo iska dhigaya inuu dab-damis wato rabana in labadii gobol ee haray ee Soomaaliyeed oo gubanaya uu baasiin ku sii shubo/ku damiyo. Waxaan dadka tusayey oo odorasayey in Koonfur iyo Waqooyiba dhibku gaarayo. Meeday Xamar iyo Koonfurtii Soomaaliya? Soow hadda Puntland iyo Somaliland iskuma heystaan Laascaano? Soow Zenawi labada dhinacba ma xukumo? Soow Zenawi oo leh waxaan badbaadinayaa shacabka Soomaaliyeed kama dhigin wuxuu dilo iyo wuxuu barokiciyo?
Waxaan maqaalka igu kallifay waa anoo dhaliilsan dadkii sheegan jiray hal-abuurka ee tirinjiray heeso ama suugaan lid ku ahaa Itoobiya markii dhibka Itoobiya intaan ka yaraa oo intooda badan iska aamusay ama goor dambe soo baraarugay. Waxa hadda hal-abuurka ama qoraalka safka hore uga jira waa dad intooda badan dhallinyaro u badan oon horay loogu aqoon hiwaayaddaas. Waa jiraan kuwo lagu yaqaanay laakiin waa yaraayeen. Ma jirto maalin ay maanta ka liidato marxaladda Soomaalida. Saasooy tahay wixii fan iyo fannaaniin sheegan jiray intooda badan waxba kama oran shirarkaas ama goor dambe bey soo baraarugeen.
Meles Zenawi wuxuu adduunka maqashiiyey in Maandeeq loo guuriyey nin Soomaaliyeed oo madaxweyne laga dhigay laakiin xaqiiqdu waxay ahayd inuu inta dagaaloogayaasha ugu xiro meher-xad uu hadhoow ka furto. Waxaad markhaati ka tihiin cidda hadda ka talisa Soomaaliya waa Zenawi. Islaamku ma ogola in nin uu naag u guursado si uu ugu xalaaleeyo nin horay iyada u qabi jiray. Ka warran nimanka Maandeeq u xalaaleeyey Zenawi? Marka gabadhii Kenya loola fakaday waxay ku dambeysay iney ka soo jeesato guriga Zenawi! Anigu markii horaba maqaalka saasaan uga danlahaa. Haddaad i rumeysan weydaan hoos ka fiirsha sawirkii la ii sameeyey 2004-tii intaan madaxweyne la dhoobdhoobin.
Gabadheennii iyo dhulkeenna waan soo ceshan karnaa haddaan heshiinno. Mar kasta oon maqaal soo qoro waxaa la i weydiiyaa maxaa xal ah. Qofka gaajo heyso wuu yaqaan in cuntadu xal u tahay. Keliya waxuu isweydiiyaa sidee cunto ku heshaa. Carruurtu markey gaajoodaan ma dhahaan maxaa gaajada iga jabin kara ee waxay u ooyaan cunto. Inkaar haku dhacdo qofkaan aqoon waxa xalka Soomaalidu ku jiro! Marka su�aashu ma ahan maxaa xal ah oo qof kasta oo muslim ah wuu yaqaan wixii xal ah ee su�aashu waa sidee xalka hadda ku gaarnaa? Waxaa fiican in la ismaqlo. Maxay saxaabadii iyo dadkii wanwanaagsanaa ku gaareen kheyrka aakhiro iyo adduun? Waa iyagoo maqlay Ilaahood. Waa arrintaas waxa Qur�aanku u ammaano dadka hadalka (sharciga) maqla sida ugu fiicanna ugu dhaqma. Nin Soomaaliyeed baa la weydiiyey sifada ugu fiican ee dumar lagu doorto. Wuxuu yiri waa iney wax maqasho. Markaasay dhaheen hadday sidaas iyo sidaas ku sifoowdo ka warran? Markaasuu yiri ku dhaha iska daa! Sey dhaheen ka warran hadday diiddo? Taan ka hadlay maaha buu ku jawaabay. Wuxuu ka wadaa wuxuu yiri mid wax maqasha. Haddana waxay dhaheen hadday sidaas iyo sidaas ku sifowdo? Haddana wuxuu yiri ku dhaha iska daa! Wixii oo dhan wuxuu uga baxay ku dhaha iska daa ileyn waa dhaganugushahoo waa iska deyneysaaye. Marka inta la iska daayo xalka la isku weyrixinayo qof walboow qabyaalad darteed nin daalin ah haku raacin. Qof kastoow qof Soomaaliyeed qabiil dartiis haku dhibin. Qof kastoow qabiil kale dartiis ha u soo dhoweysan Meles Zenawi. Haddaan saas yeelo xalka waan gaareynaa.
Waxaad mooddaa inaan ku dayannay falsafadda masiixiyiinta ee dhahaysa waxa Ilaah necebyahay dambiga ee ma necba qofka dambiilaha ah. Sida xaqiiqada ah dhibku waa dambiilaha ee maaha dambiga. Dambigu keligiis gooni uma jiro. Dambigu waa maxsuul. Weligiin ma aragteen qof aan wax xadin oo tuug ah? Tusaale ahaan ma jirto wax qabyaalad la yiraahdo oo bakhaaro noogu xareysan. Qabyaaladdu waxay timaaddaa marka nafteenna iyo sheydaan inta caqliga Ilaah na siiyeeyey isticmaalaan dabadeedna aan si ficil ah qof ugu dhibno. Markaasaa qabyaalad timaaddaa. Yaa dambiga leh ma innaga intaan fekernay ficilka sameynay mise wax maxsuul ah sida qabyaaladda? Xitaa feker keliya kuma filna inaad wax ku dhibtid. Ka soo qaad inaan ku fekerro inaan qof qabiil kale ah aan ku dhibo qabiilka uu yahay dartiis laakiin markaan xoogga joogay weli anoon wax dhibin baan goostay in aan Ilaahay arrintaas uga baqo dabadeedna aan faraha ka qaado. Ma sameyn wax dambiya mana soo bixin wax qabyaalad ah. Waxaan mar kale ku celinayaa qabyaalladdu ma ahan wax maaddi ah oo sida sunta kale. Tusaale ahaan sunta nukliyeerka ama qashinka ka soo hara warshadaha waa maaddi marka waxaa dhib ah sidii loo aasi lahaa xitaa haddaan goosanno ineynaan cid kale ku waxyeeleyn. Waxaa la hubaa in qabyaaladdaan sameynay intii dowlad la�aantu jirtay aysan meel noogu keysaneyn keliya haddaan is cafinno oo faraha ka qaadno dhib dambe nooma keeneyso. Burburkii iyo dhaawicii ay keentay waa muuqanayaan laakiin haddii laga haro iyada saameyn dambe ma yeelaneyso. Qofkii si uun u fahmiwaaya waxaan ka wado ha isoo weydiiyo.
F.G. Anigu waxaan aamminsanahay in Ilaahay wax walba abuuray xitaa maxsuulka sida dambiyada. Waxaan kaloo aaminsanahay ineynaan dambaabeyn haddeynaan xumaan sameyn. Marka maxsuulkaas sida dambiyada ee Ilaahay abuuray cidna khatar kuma aha haddeynaan innagu xumaan la imaan.